Propoosaala Paartiileen Nafxanyaa 3: ABIN (አብን), GINBOOT-7 fi (ግንቦት 7), BIADIN (ብአዴን)
HomeAfaan OromooPropoosaala Paartiileen Nafxanyaa 3: ABIN (አብን), GINBOOT-7 fi (ግንቦት 7), BIADIN (ብአዴን)
Kutaa 1ffaa fi 2ffaa
Qeerroo Oromiyaa, Onkoloolessa 5, 2020
Oromiyaa miila hin Shokoksineen Seenanii Oromiyaa diiguudhaan Itiyoophiyaa ol Aantummaa Amaaraa jalati debisanii Ijaaru
Propoosaala Projektii Paartiileen Nafxanyaa 3(ABIN (አብን),GINBOOT-7 fi (ግንቦት 7), BIADIN (ብአዴን)) Finfinnee, Baardaarii fi Goondaritti Icciitiin mari’atanii Oromiyaa ittiin Diiguuf baafatte tartiibumaan hojii irra oolaa jiru. Dubbisaa waliif dabarsaa
– 1ffaa: Sagantaa fi Proojektii Uummataa Amaaraa ykn Nafxanyootaa Oromiyaa keessaa qubachiisuu
ABIN (አብን), 2. GINBOOT-7 fi (ግንቦት 7), 3. BIADIN (ብአዴን)
1ffaa: Demography Uummataa Oromo Oromiyaa keessaa jiruu jijjiiruu
Maalaqa guddaa ramaduun lafa fi mana Oromoo fi Tigirootaa irraa bituun qubachiisuu. II. Bataskaanaa Ortodoksii yoo xiqatee Ganda Gandaa fi Mandara madaraan ijaaru.
Abbootiin Qabeenyaa Amaaraa Oromiyaa keessatti invest gochaa jiran hundi Amaaraa qofa akka qaxaraan /miindesaan gochuu.
Abbootiin Qabeenyaa Amaaraa Real Estate /Qabeenya lafa fi ijaarsa maneen jireenya lafa Oromoo irratti hojjechaa jiran maneen ijaaraani gurguran hamma danda’ame Amaraatii gatii xiqaan akka gurguranii qubachiisaan fi kaneen kanafiis humnaa hin qabne immoo qotee bulaa Oromoo irraa lafa akka bitatan gargaaruu
Warreen karaa maatiis ta’ee carraa hojiitiin as godanee Oromiyaa keessa qubatemoo Waraqaa eenyummaa akka itti argatan haala mijeesuu fi Warri argatee hundi immoo mootummaan iddoo mana jireenyaa akka kenuuf gaafachuun akka lafa jireenya argatan gochuudha kan jedhu.
Bara kana, bara 2012 kanas Laga Xaafoo keessatti qofa maneen seeraa qabeessaa Kuma sadii (3000) kaan bitanii kaan ijaaraani ittii galani jiru. Jara kanaaf Dr. Milkeessaa Miidhagaa inni dhiheenya kana aanggoo irraa kaafame bishan hin galchuu jedhee didaa turus ammaa ji’aa kana keessaa dabareedhan /taraadhan bishaan galafii akka jiru eenyuu ilee mirkaneefachuu ni danda’aa. Hanga ammaa mana 60f
bishan galee jira. Seenaa manoota kanaa yoo yaadatan ta’e Bara 2011/2018 Mootummaan naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaan gaggeeffamu maneen Seeraan alaa digsiisuu calqabnaan warrii Proojektiicha jalqaban Dr. Abyyii Ahimed biraa deemanii kadhatan. Isaa boodaa innis Lammaa Magarsaa sossoobee dhaabsiisee. Yeroo san Abyyii lama duubaan namoota baayyeetu jira jedhe wan sodaatuuf sodaachisee oddo hin taane siyaasa keenya nu jalaa baleesaa ammaf dhiisi yeroo bira itti deebina jedhe gowomseeti. Sababumaa Lammaa Magarsaa Imamataa Nafxanyootaa kana fashaleessuuf ejjennoo qabatee Abyyii suuta jedhee Lammaa aanggoo irraa kaasee.
Har’aa lafa Oromiyaa abbaan barbaade qotee bulaa Oromoo irraa maalaqaan bitee kan immoo lafa weeraree halkan ijaaraa buluu itti fufus Mootummaa naannoo Oromiyaa gonkumaa jara kana hin tuqu. Miilaa hin shokoksineen Naafxanyaan Oromiyaa dhuunfachaa jirti
Kutaan 2ffaa ittii fufa
KUTAA 2FFAA: Hiccitii Proojektii habashoota “Oromiyaa miilaa hin shokoksineen Seenanii Oromiyaa diiguun Itiyoophiyaa Ijaaru”:
Onkololeessaa, 2018 jalqabee, hanga Fulbaana 2028 xumuramuu. Kunis Sagantaa fi karooraa Paartilee Nafxanyootaa Waggaa 10 keessatti Uummataa Amaaraa fi habashoota Miliyoona 10 hanga 15 Oromiyaa keessaa qubachiisuun Oromiyaa fi Oromoo Diiganii Impaayera Itiyoophiyaa Ol-aantummaa Amaaraa jalati debisanii ijaarutii.
Guyyaa kana irraa egaalee miseensoni fi hooggantooni Paartilee Nafxanyootaa, Abbootiin qabeenya isaanii lafa Oromiyaa Saamanii of harka qaban, Irree Oromoo fi ABO arganii “Ebaannee”, “ebaannee”, jedhan, Sodaa fi naasudhaan off-walaalaan. ABO fi Qeerroo irreen Feerroo irraa of baraaruuf
hatattaaman Oolaanii osoo hin buliin, “Mataduree Itiyoophiyaa fi Itiyoophiyaanotaa bararuu”, “ኢትዮጲያ እና ኢትዮጲያዊነትን ማዳን” jedhuun, walga’ii hatattamaa dhoksadhaan, ergaa Finfinnee, Bahaar dar, Gondorii fi Dabraa Birihaan ittii ta’anii boodaa Murtiiwwaan Kutaa 1ffaa keessatti eramee san irraa ga’aan isaa keessaa inni Guddaan Amaaraa miliyoona 12 hanga 15 waggaa 10 keessatti Oromiyaa keessaa qubachiisuun, ABO of irraa ittisudha, uummannii Oromoo yoo Gaafii Hiree ofiin murteeffachuu hanga foxoquuttii jedhu kasaan ta’ee dafanii Uummataa Habashaa kan akka Amaaraa Guragee fi Dorzee qabachiisuuf Referandamiin Kufaa gochuun Waggaa 15 boodaa “City estate” Finfinnee fi Godiinaa addaa naannaawaa Finfinnee waliin Dabraa Biraan ittii dabalanii Naannoo of dandeechee gochuuf karoorfatan. Kunis naannoo Amaaraa isaa 2ffaa akka ta’uu danda’uti kan hojjetamuu ta’uu walii galan, Heeraa Mootummaa fulduraattii foyya’ee ba’uu irraattis beekamtii akka argatuuf akka cimsanii qabsa’anii fi isaa duraa Uummataa qubachiisuun Diimoograaphy (baayyinaa Uummataa) jijjiruun barbaachisaa akka ta’ee mariyaatanii wal hubachiisaan.
Uummataa Amaaraatii aansee uummaatootaa kibbaa keessaa Uummataa Guraagee fi Doorzeen baayi’inaan Oromiyaa keessaa Finfinnee fi naannaawaa ishee akka qubatuu haalaa mijeesuufii, kakasuunis akka sagantaa tokkooti ka’amera. lakkoofsi isaani garuu hin ibsamne.
Oromoota keessaa namoota dhiigaa Amaaraa qabanii fi tokkummaa Itiyoophiyaa barbaadan kaneen Amaaraan walii galuu danda’aan ilaalchaa Itiyoophiyummaa qaban Dr. Abiyyittii himanii Abyyii, akka Aanggoo ykn Muudama siyaasa kenuuf, isaa boodaa dhima lafaan wal qabatee, karataa fi kkf akka isaan gargaaruu dhima ittii ba’aan.
Sadarkaa Federalattii, iddoo Hooggansa murteessaa ta’ee irratti dhalataan Amaaraa akka muudamu Dr. Abyyii Ahimediif yaada dhiyeessuun (Recommendation) akka muudamaan tasiisuu. Isaa boodaa muudamaan sun waajjiraa isaa keessatti Amaaraa hedduu naannoo Amaaraatii fudhanii akka qaxaraan tasiisuu.
Gaaffiileen Oromoon kaasaa jiruu kaneen akka Finfinnee fi Afaan Oromoo akka hin rawwaataamne dhiibbaa tasiisuun qabsoo duraa dhaabachuu.
ABOn diinaa tokkummaa Itiyoophiyaa waan ta’eef, hanga diigaamee maqaa isaa jijjiiruttii akka dorgommii filannoo irratti hin hirmannee qabsa’uu, deebi’e akka biyyaa ba’uu fi seeraan akka gaafataman yaada dhiyeessuu mootummaa irratti dhiibbaa gochuu. Mootummaan Abyyii yeroo ABOirraattii tarkaanfii fudhatuu jajjabeessuu hiiriiraa ba’uun deggaaruu.
Dhaabni maqaa Sabaatiin qabsa’uu akka diigamu fi kunis salphaati ABO digsiisuu akka danda’u, isaa boodaa ABIN Paartilee maqaa Itiyoophiyaan socho’aan waliin akka walitti makamuu.
Heerrii mootummaa kan fooyya’u yoo ta’ee Keewwata 39 guutumaan guutuuttii akka haqamuu, fi Heerrii Mootummaa Keewwata 2, 3 (2 fi 3), 8, 47 fi 49(5) immoo partially akkataa tokkummaa Itiyoophiyaa ijaaruu danda’uun akka foyyaa’ee barreefamu. Fayiidaan Oromiyaan Finfinnee irraa argatu jedhu guutumaan guutuuttii akka heera mootummaa irraa haqamuu qoraannoon gaggefamee akka yaadaattii Mootummaa Abyyii hogganuuf akka dhiiyyeessaan.
Hoggaantootaa Oromoo OPDO keessaa jiran kaneen ergaamtuu ABO fi Jawar Mohammad ta’an dhaabaa keessaa fi EPDRF keessaa akka ariiyaamaan ykn hooggansa gadii aanaa irratti akka muudamanii qabsa’uu yaadaa ykn Recommendation mootummaa Abiyyif dhiyeessuu.
Qeerroon yeroo ABO simaachuuf Finfinnee seenuu ijoollee Amaaraa Finfinnee keessaa reebanii lubbuu basanii waan jiraaniif akkasumas yeroo ba’aan Burayuuti Uummataa Itiyoophiyaanotaa waan midhaniif yeroo biroo haalaa wal fakkatuun Amaaraa midhuu waan dand’aniif Uummannii Amaaraa Naannoo Oromiyaa, Naannoo Kibbaa fi Finfinnee keessaa jiruu akka Meeshaa waranaa hidhaatanuu fi akka qabeenya fi lubbuu isaanii badii irraa ittisan. Hooggantooni naannoo Amaaraa fi magaalaa Finfinnee jiran haalaa akka miijeessaan Meeshaa dhiyeessuun akka hidhachiisaan walii galani turan. Bu’urumaa kanaan hanga ammaattis ummata Amaaraa Finfinnee keessaa, Adaamaa, Bishooftuu, Laga Xaafoo fi Laga Daadhii kan Meeshaa waranaa hidhachiisaan yoo ta’uu Hidhannoo cimaa fi meshaalee waranaa Jajjaboo kan hidhatee garuu Amaartootaa magaalaa Adaamaa, Wallaagaa fi Harargee Lixa fi Naannoo Siidaamaa keessaa jiraniidha. Isaanis Meeshaa Feesisee dhaqee kan hidhachiisee Jeneraal Asaminoo Tsigee, yoo ta’uu Ermiyaas Amalgaa, Kirsti’an Taddalee fi kaneen maqaan isaanii ifa hin tanee immoo gargarsaa fi gorsaa addaa addaa kennaa turaniiruu. Mallaqnii miliyoona hedduun lakka’amuu Abbootiin Qabeenyaa dhalataa Amaaraa Oromiyaa Finfinnee fi U.S keessaa walitti qabamee sagantaa kanaaf ooleraa, oolaa jiraas.
Bakka bu’uummaan Uummaatootaa Amaaraa naannoo Oromiyaa keessaa jiraatan kan miliyoona 5 ol ta’aniif bakka bu’uummaan hooggansa Sadarkaa kabiinee mootummaa Naannoo Oromiyaati, akkasumas caffee Oromiyaa fi Parlamaa Federaalaa keessatti akka kennamufii Cimsanii akka qabsahaan irratti walii galaniruu. Kunis bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessaa galuun Sagantaan isaanii kun akka milka’uuf haalaa mijeesuuf waan danda’uuf cimanii qabsa’uu kan jedhudha. Bu’urumaa kanaan Bakka buutonni Nafxanyootaa kun Mootummaan Itiyoophiyaa Dr. Abyyii Ahimediin hoggaanamu Uummannii Amaaraa yeroo Ammaa kana Oromiyaa keessaa jiruu miliyoona shan ol bakka bu’uummaan akka kennamuuf jechuun gaafii gaafatan. Innis ani gaafii kana deebisuu hin danda’u deemaatii Paartilee Mormitootaa Oromoo ABO, KFO fi kan biroo waliin mariyaadhatii walii galaa (tadaradara jedheen). Gaafii kana irraa ka’uun hoggaantootaa Paartilee Oromoo hiccitii kana hin beeknee fi Paartilee Amaaraa sagantaa kana rawwachiisaa jiran waliin akka mariyaatanii Mootummaan haalaa miijjessee yeroo addaa addaa mariyaatanii jiruu.
Miseensoni fi hooggantooni Amaaraa, hoggaantootaa Paartilee Oromoo waliin mariiyatan kunis, Finfinnee baayi’inaan Uummataa Amaaraa qubatee jiraa waan ta’eef kan Amaaraa ta’uu qaba, yaadaa jedhu kan calaqisissan yoo ta’uu gama biroon immoo Uummannii Amaaraa Naannoo Oromiyaa keessaa jiraatu Miliyoona 5 ol bakka bu’uummaa siyaasa Parlamaa Federaalaa keessatti fi caffee akkasumas hooggansa naannoo Oromiyaa keessatti argachuu qaba yaadaa jedhu cimsanii kaasaniru FKNf liinkii kana tuqaa ilaala https://www.youtube.com/watch?v=a7xKnEC7CF4&t=437s የአማራና ኦሮሞ ፖለቲከኞች እና ምሁራን ውይይት. As irratti wanti qabasa’oonnii Oromoo martii hubaachuu qaban bakka buutonni Nafxanyootaa uummannii Amaaraa Oromiyaa keessaa jiruu Parlamaa fi caffee keessatti bakka bu’uummaa argachuu qaba kan jedhan sagantaa Oromoo ittiin diigaan keessaa tokkoo yoo ta’uu kunis
Bulchiinsa fi hooggansa naannoo Oromiyaa keessaa galuun Taarsimoo ittiin Amaaraa fi Habashoota miliyoona 12-15 waggaa 10 keessatti Oromiyaa keessaa qubachiisuuf karoorfatan mootummaa Abyyii waliin ta’uuf akka rawwatan waan isaan fayyaduufidha.
Abbootiin qabeenya Habashoota Paarkii tokkummaaf maalaqa guddaa gumaachaanii fi dhumaa irraattis Irbaataa qarshii Miliyoona 5n masaraa Minilik keessatti nyaataan kallaattiin Dr. Abyyii Ahimed Takkalee Umaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa ajajuun qarshii basaniif kan oluu lafa Invastimantiidhaaf lafa heektaraa hedduu akka kennamuuf ajajajee kennamefira.
Dabalataan Abbootiin Qabeenyaa hayyoonnii fi hooggantooni Paartilee Habashoota kun waliin ta’uun Hoggaanaan Gumuruk akka ka’uu fi Hoteelaa sodaree misoomsuuf fedhii akka qabaan Dr. Abyyii Ahimed fi niitii isaa Dani’eel Kibrat gaafatanii Dr. Abyyii hoggantuu Gumuruk kaasuun bariituu sodareen akka cufamuu kallaattiin ajajeraa. Ittii aansee waan ajajuu garuu hin beekuu.
Diinagdee Oromoo fi Oromiyaa ajjeesuufis karooraa basaniruu, kunis Oromiyaa keessatti investimantiin gutumaattii dhaabatee naannoo Amaaraa keessaa naannoo Dabraa Biraanittii akka tasiifaamuu, daladaltootaa Oromoo gabaa kessaa akka ba’aanuu, kkf illee karooraa keessaa kan jiruu yoo ta’uu Dr. Abyyii Ahimed Sagantaa fi Karooraa isaanii kallaattiin bilbilan Shimmallis Abidsaattii, Takkalee Umaa fi kaneen biroottii bilbiluun rawwachiisaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo laftii samamama jiruu, mannii seeraan alaa ijaarama jiruu tarkaanfii fudhachuuf yeroo yaaluu Dr. Abyyii Ahimed akka tarkaanfiin sun hin fudhatamnee waan dhorkuuf hoggaantootaa naannoo samamuu fi weraraa lafa seeraan alaa kana mormaan hojii irraa ari’uu arrabsuu fi sodachisuun cimee ittii fuferaa.
Yeroo Lammaa Magarsaa Naannoo Oromiyaa Bulchu Maneen seeraan alaa ijaaraman diiguu jalqabnaan Nafxanyoonnii kun Dr. Abyyii Ahimed dhaqanii gafatanii Dr. Abyyii Ahimed dhaabsiisee, kanammoo Isaanuu raga ba’aniruu. Dabalees Lammaa Magarsaa Proojektii jarrii kun karoorsan beekuu batus dhumarraattii Faayidaa Oromiyaa dabarsee kennuu waan dideef Bittaa fi gurgurataa lafaa cimee waan dhabsiiseef Naannoo Oromiyaa irraa akka ka’uu marii Dr. kenaanii Oromiyaa irraa sossobanii kaasaniru.
Dr. Milkeessaa Miidhagaa haalaa ammaa deemaa jiruun lafatii naannaawaa Finfinnee akkuma Finfinnee yeroo mursaa boodaa Oromoo harka bahuuf deemaa jedhee mannii seeraan alaa ijaarame akka diigamu, Qubannaan habashoota kun akka ristirik (to’atamuu) gochuuf yoo deemuu Jarrii Dr. Abyyii biraa deemanii Dr Abyyii kallaattiin Prizidaant Shimmallis Abidsaattii dheekkaamee Shimmallis Abdisaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa Qoratanii sammuu hadochaan. Kana irratti Dr. Milkeessaa illee aanggoo aragateettii fayyadamee ejjennoo wanta kana fuuldura dhaabbachuu osoo qabuu akka mukaa qillensaan raafamee kufeera.
Gama seeraan maneen seeraan alaa Bosonaa kaabaa Finfinnee keessatti halkan ijaaramaa buluu, taaboonnii waaqqaa roobaa bulaa, Qeesoonnii Gojamii fi Gondorii dhufu, Amaarrii Miliyoonan aritiin lafa Oromiyaa irra qubataa jiruu, Oromoon Garuu raafeeraa, Mootummaan naannoo Oromiyaa nama hayyamaa malee lafaa bitee mana ijaaree seeraattii dhiyyeessee adabsiisuu nidanda’aa .Garuu hanga
ammaattii waliigalaa maneen Kuma 37 ol seeraan alaa Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Sulultaa, Burrayyuu, Sabbaataa, Boolee Bulbulaa, Boolee, Hintooxxoo, Haqaaqii, Adaamaa, Bishooftuu, Duukam, Sabbataa, Alamganaattii, yeroo ijaaraani diinnii Miliyoonan lakkaa’amuu ittii galuu Mootummaan Oromiyaa nama tokkoo seeraattii dhiyyeessee hin adabsiifnee. Gochi lafa bituu, weeraaruu, ijaarsi seeraan alaa rawwachuun yakkan labsiin kan adabsiisuu jiratus hangaa ammaa namni kanaan gaafatame hin jiruu. Oromoon yoo ijaaree mannii isaas ni digaamaa Naafxanyaan gaafaa jiraatee garuu kaartaan ni kennamaaf bishanii fi ifaanis ni galaaf.
Dabalataan yeroo uummannii dhibee Koronaan sardamee mannattii galee jiruu Nafxanyoonnii maneen seeraan alaa Oromiyaa keessatti halkani fi guyyaa ijaaraa jiruu. Torbaanumaa kana keessaa mannii 900 (dhibbii sagal) Boolee fi Naannaawaa Finfinneeti torbee takka keessatti ijaarameera. Maneen biroo Bosonaa Hintooxxoo irraattis ijaaramaa jiraa, Poolisiin Oromiyaas kan Federaalaas wanti isaan jedhan
hin jiruu. Sabababiin isaan Nugusiinn Dr. Abyyii Ahimed dhorkaa jedhee ajajaa waan hin dabarsiineef. Kanaaf Manaa saamoonaa kana ijaaramee hunda yoo mootummaan guyyaa 3 hangaa 4 Keessatti hin digsiifnee mana Naafxanyaan ijaartee qofa filanii kibrittii firii takka, takka adabuun dirqama ilmaan Oromoo dirqama warrdiyyotaa Oromiyaati. Kanafuu, Sagantaa Naafxanyaan Miilaa hin shokoksineen Oromiyaa seentee Oromiyaa diiguun ol-Aantummaa Amaaraa jalattii Itiyoophiyaa ijaaruuf karoorsiite kana akkamittii dhaabsiifnaa kan jedhu kutaa dhumaa kutaa 3ffaa keessaattiin isiiniff qabaadhee dhiyadhaa. Barruu kana kutaa 1ffaa fi 2ffaa siirriin irraa deddebiiyaa yeroo kennaa dubisaa, xinxalaa keessaniis kennaa. Sheerii gochunis Oromoota mara biraan ga’aa. Garaa Afaan Jaarattii hiikuun dhorkadha.
Kutaa 3ffaa karooraa Nafxanyootaa kana akkamiin dhaabsiifnaa kan jedhudha irrati nu eegadhaa. Kutaan 3ffaa ittii fufa
Konferensii Gurmuu Hayyoota Oromoo (GHO) marsaa 2ffaa
Stand up and defend yourselves; never be seen as suitable prey for the naftagna predators. The great Oromo people need great leadership capable of leading them towards self-defense, freedom and dignity as a nation with immense potential.